Home » Layaab »
Caalamka aynu ku nool nahay ayaa waxaa ka jira arrimo dadku ay la yaabaan kuwaasoo aan caadi ahayn, Haweeney culeyseedu ka badan yahay saddex boqol oo kilo ayaa dooney inay carruur dhasho kadibna noqoto haweeneyda ugu miisaanka culus caalamka.
Monica Riley ayaa ah haweeney 27 sano jir ah balse waxa uu culeyskeedu gaarayaa 317.50 Kiilo waxayna dooneysaa in ay dhasho carruur.
Monica oo saxaafada la hadashay ayaa sidoo kale sheegtay inay jeceshahay in ay noqoto haweeneyda caalamka ugu miisaanka badan leh iyadoo rajo ka qabta in uu culeyskeedu uu gaaro 442.5.
“Waxaan doonayaa in aan ilmo dhalo balse marka hore waan is caateynayaa mana ahan in aan caato weyd ah rabo balse marka aan umulo dib ayaan u soo ceshanayaa culeyskeyga waayo wxaan doonayaa in aan jebiyo rikoorka u yaal miisaanka dumarka.”ayay tiri Monica
Mar la weydiiyay sida ay ilmo u xanaaneyn karto iyadoo misaankeedu yahay mid aad culus ayaa ku jawaabtay in ay qarash ku bixin doonto xanaanada ilmaheeda.
Haweeneydan ayaa marka ay wax cabayso waxaa diblad ku siiya seygeeda waxayna qoyskan lacag ka soo gashaa marka ay muuqaalo video ah oo ah qaabka ay wax u cabto ama u cuno haweeneydan ay soo bandhigaan.